बिराटचौक ट्रिपर दुर्घटना : एक्ली सन्तान लक्ष्मीको अन्तिम संस्कारमा आमाबुबा आएनन् – aajnepal
HomeNewsबिराटचौक ट्रिपर दुर्घटना : एक्ली सन्तान लक्ष्मीको अन्तिम संस्कारमा आमाबुबा आएनन्
विराटचोकः आँगनमा बाँस ठिक्क पारिएको छ । शव बाँध्ने गरी बाँसका चोया पनि निकालिँदैछ । मानिसको हुल बीच घरको मूलढोका अगाडि एक महिला आम्खोरामा पानी बोकेर बाहिर आइन् र शव राख्न ठिक्क पारिएको ठाउँमा पानी अचाइन् । हुल निःशब्द रह्यो । सबैका आँखा चलमलाइरहे । अघिल्लो दिन रणभूमिजस्तो बनेको सो स्थान आज सुनसान देखिन्थ्यो ।यो दृश्य सुन्दरहरैँचा–९ स्थित लेखनाथ ढकालको घरको हो । दिवङ्गत भतिजी लक्ष्मीको पार्थिव शरीर कुरिरहेका ढकालले हामीलाई भन्दै थिए, ‘मङ्गलबारे अस्पतालबाट लाश आउँदैछ, आजै इटहरीस्थित बुढीखोलामा दाहसंस्कार गर्ने हो ।’
सोमबार लक्ष्मीको मृत्यु भएसँगै ढकाल परिवार पीडामा छ । भाइ चुडामणि र बुहारी सबिताबीच वर्षौँदेखि खटपट हुन थालेपछि लक्ष्मीको अभिभावकत्व लेखनाथले लिएका थिए । भाइ र बुहारी अलग भएको लामो समयपछि पछिल्लो शनिबार बुहारीको फोन आयो, ‘मैले अर्कैै व्यवहार गरें । मेरो खोजी नगर्नू ।’बुहारीको फोन आउँदा भाइ घाइते भएको केही दिन भएकोे थियो । दाइले दुःखी हुँदै भने, ‘भाइको नियमित रक्सी खाने खराब लतले परिवारमा विचलन आयो ।’ सवारी दुर्घटनमा परेका भाइले औषधीको सट्टा बढी रक्सी पिएपछि थप शिथिल बनेका थिए । विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल अस्पताल लग्ने तयारी हुँदाहुँदै लक्ष्मीको शिरमाथिबाट ट्रिपर दौडियो ।
सडकमा आगो बल्न थालेपछि लक्ष्मीका बुबालाई थप व्यथाले च्याप्दै लग्यो । सडकमा ढलेकी छोरी छाडेर आफ्नो उपचारका लागि चुडामणि अस्पताल पुगे । व्यथाले गल्दै गएका उनी मङ्गलबार छोरीको अन्तिम संस्कारमा आउन सकेनन् । न त अन्तै बिहे गरेकी आमा नै छोरीको अन्तिम संस्कारमा आइन् ।दाइ लेखनाथलाई चिन्ता छ, भाइ बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने । चिकित्सकले दिल्ली लग्न सके मात्र बाँच्ने बताएका छन् । तर, ग्यारेन्टी गरेका छैनन् । उनको एउटै ध्येय थियो, भाइले रक्सी नपिदिएको भए परिवार हाँसीखुशी बस्थ्यो ।अन्तरकुन्तरमा उनको मनमा लाग्छ, कतै बुवाआमा सँगै भए छोरी लक्ष्मी आज पनि हामीसँगै नजिकिइरहेकी हुन्थी कि ।
-यो समाचार हामीले प्रदेश प्रोटलबाट लिएका हौं ।
‘को वीपी ? कहाँको वीपी ? हामीलाई थाहा छैन, यो मधेसको भूमि हो’